St Mary's CE Primary School - About our school Somali translation
About our school - Somali translation
Iskuulkayaga waxa uu yahay
St Mary’s waa iskuul aad ufiican, waxaana nahay iskuul aad usareeya, qof kasta oo iskuulkan ka shaqeeyana waxa uu ku dadaalaa siday waxbarashada ciyaalka loo kiciyo, heer sare ay ka gaaraan, la dhaqan koodu fiicnaado iyo in ay is caawiyaan dhexdooda, koritaankooduna uu noqdo mid kalsooni ku dheehan tahay.
Waxa uu yahay hadafkeenu in ciyaalka aan ku caawino in ay ahaadaan kuwa isku kalsoon, kuwa karti badan iyo waliba kuwa hadal qeexan oo soo gudbin kara fikradahooda.
Waxaan nahay iskuul xiiso leh, kalsooni badan isku qaba, caruurta iskuulkeena dhigtana way ku farxaan waxbarashadooda waxayna sameeyaan horumar aad u wayn. Iskuulkeena ilmo walba waxa uu ubaahan yahay ayaan ka caawinaa. Waxaan iskuulkeena u dabaal degnaa waxa la yiraahdo kala duwanaashaha, waxaana ciyaalka barnaa inay qiimeeyaan dadka dhaqanka iyo diinta kala duwan leh iyo kuwa isku mid ka ahba iyo waliba inay kala duwanaa shahaas ixtiraamaan.
Iskuulka St Mary’s waxaan aad u qiimaynaa sida wacan ay waalidiintu u caawiyaan ciyaalkooda siday u gaari la haayeen horumar wacan. Waxaan kaloo qadarinaa waxyaabaha dheeraadka ah ay waalidiintu ku soo kordhiyeen nolasha iskuulkanaga.